ကိုယ်ချင်းစာတရား - MYATMINGALAR
အိုဗာတိုင်း(မ်) ဆင်းတဲ့ “လ”
ကြည့်လို့ကို အဆင်မပြေဘူး ။
ဒါက သူ့အမြင်ပေါ့ . . . ။
အသိပေးနေရတာ လွယ်တာမှတ်လို့ . . . ။ ။
Posted in: ကဗျာTagged : ရှငိုင်ဂျော် (MICT)